Dowladda oo sheegtay ineysan awoodin hadda kadib soo daabulidda Qaxootiga Soomaaliyeed ee Libya – Bandhiga
Home Dowladda oo sheegtay ineysan awoodin hadda kadib soo daabulidda Qaxootiga Soomaaliyeed ee Libya
Dowladda oo sheegtay ineysan awoodin hadda kadib soo daabulidda Qaxootiga Soomaaliyeed ee Libya
in Dowladda oo sheegtay ineysan awoodin hadda kadib soo daabulidda Qaxootiga Soomaaliyeed ee Libya
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo joogta Magaalada Tripoli ee Caasimadda dalka Liibiya ayaa soo sheegay in muddo shan bilood ah ay dhibbaato ku heysato gudaha dalkaas oo ay u tageen kolkii hore in ay kaga sii tahriibaan Dalalka Yurub.
Mid kamid ah dhalinyarada oo la hadlay VOA waxa uu sheegay in muddo saddex bilood ah ay ka daba wareegayeen hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay u qaabilsan ee loosoo gaabiyo UNCHR iyo Hay’adda Socdaalka Adduunka ee IOM.
Waxa uu sheegay in ay waayeen cid ka jawaabta dalabkooda ah dib usoo celinta dalkooda, maadaama dhibaatooyin is biirsaday ay ku heysato Liibiya, dhowr jeerna ay u qaylo dhaamiyeen hay’ado kala duwan iyo Safaaradda Soomaalida ee Tripoli.
“Lacag badan ayaan ku bixinay sidii aan u gaari lahayn Liibiya oo aan kaga sii gudbi rabnay Yurub, balse waxa aan la kulanay dhibaato nafsadeed oo nagu sababtay in aynu doorano dib ugu laabashada dalkeena oo aan kolkii hore kasoo tagnay, waxa aan dalbaneynaa in naloo fududeeyo dib ugu laabashada Soomaaliya” sidaasi waxaa yiri mid kamid ah dhalinyarada.
Dhanka kale, Danjiraha Soomaaliya ee Liibiya Muxudiin Maxamed Kaalmooy oo isna la hadlay VOA waxa uu sheegay in aysan awoodin samatabixinta dhalinyaradaan Soomaalida ah ee xanniban Liibiya.
Sababta waxa uu ku sheegay in aysan heli Karin dhaqaalaha lagu qaadayo, xayiraadda caalamiga ah ee saaran dalalka kala duwan ee caalamka sabab la xiriirta Coronavirus iyo dhammaan dhaq-dhaqaaqyadii kala duwanaa oo yaraaday.
Xukuumadda Soomaaliya oo kaashaneysa Hay’adda Socdaalka Adduunka ee IOM ayaa dhowr jeer oo hore dalal Liibiya ay kamid tahay kasoo qaaday dhalinyaro ku dhibaateysan, kuwaas oo u gacan galay kooxaha lacagaha ka qaata kolka ay qabtaan tahriibayaasha Soomaalida ay qayb ka yihiin ee wadankaan u taga si ay uga sii gudbaan Dalalka Yurub.
Xabsiyo ku yaalla Liibiya waxaa wali ku jira Dhalinyaro u badan Soomaali, kuwaas oo sheeganaya in ay waxyeelo kala kulmaan kooxaha gacanta ku haya, waxaana qalalaasaha ka jira dalkaas uu sababay in ay kordhaan maleeshiyaadka hubeysan ee afduubata dadka si ay lacago madax furasho ah uga helaan.